7 AMABALA AMAHLE EEHOLIDE KULUTSHA | UTHINTELO - UBOMI
Iindawo ezi-7 ezilungileyo zokuLungiselela ulutsha
Eyona / Ubomi
Ukucinga nje ngeholide kunye nomntwana wakho okwishumi elivisayo kunokuzisa intloko ebuhlungu. Emva kwayo yonke loo nto, ngenxa yesimo sabo sengqondo sokukhathazeka, ukunganakwa okufutshane, kunye nokwala ukubeka iifowuni zabo ixesha elide kunemizuzu embalwa, abasoloko benza amaqabane ohambo olonwabisayo.
Ukunxanelwa kolutsha inkululeko, kudityaniswa nezinto abazikhethayo kunye nezimvo zabo, kunokubonakala kunzima xa usenza izicwangciso zokuhamba, utshilo u-Amanda Norcross, umhleli we Umgxeki weeholide zosapho , indawo yokuhamba yosapho TripAdvisor.com .
(Qalisa ukuqala kocwangciso lwakho lohambo kunye neenjongo zezempilo kunye Ikhalenda yoThintelo ka-2018 ! Ipakishwe ngeentsuku ezingama-365 zeengcebiso malunga nokuba sempilweni kunye nenkuthazo efuneka kakhulu.)
Nangona kunjalo, ungayilahli kwaphela ingcamango yeholide. Ukuhamba nomntwana wakho okwishumi elivisayo kuninika nobabini ithuba lokubona nokufunda izinto ezintsha kunye nokufumana amava amatsha. Kuba ukude neturf yakho yasekhaya, umntwana wakho okwishumi elivisayo kunokuba lula ukuba ahambisane (kwaye nawe!), Ke ukuhamba kunye kungaphucula iqhina enabelana ngalo. Kulungile, ukuhamba kunye neenkumbulo ezenziwe kunye ziya kuhlala nazo kubo bonke ubomi babo. (Ngaba unomntwana okhulileyo? Intloko kwenye Iindawo ezili-10 ezilungileyo zeholide zabantwana abadala .)
Nantsi isikhokelo sakho sokuhamba ngeholide:
Siyazi ukuba abakwishumi elivisayo banokukhetha kakhulu (kunye ne-bratty) malunga neendawo abafuna ukuya kuzo kunye nezinto abafuna ukuzenza, ngenxa yoko silwenzile olu luhlu lweyona ndawo ifanelekileyo yokufikisela ulutsha kulutsha.
Kwiimbali zeMbali: iWashington, DC
Ikomkhulu lesizwe ligcwele izinto ezinomdla kubantu abadala nakwishumi elivisayo. Ukongeza kwiindawo ezibonakalayo kwi IWashington, D.C. Njengesikhumbuzo seLincoln kunye neChibi lokuCinga, iCapitol Building kunye neSikhumbuzo saseWashington, wena kunye nomntwana wakho unokutyelela iNdlu yeNdlu. Ukuba uzama kwangaphambili (kude kakhulu), unokukwazi ukufumana amanqaku etikiti kukhenketho lwangaphakathi. Izicelo kufuneka zenziwe ngelungu leNgqungquthela.
Ukuba ezo zinto zikwasesikolweni kakhulu kumntwana wakho okwishumi elivisayo, kunokuba yinto enomdla ngakumbi xa ebona iindawo ezahlukileyo xa ekhwele uSegway. Isixeko Segway Tours DC Ufumana amanqaku amahle ngabavavanyi beTripAdvisor, okanye ungafumana umthambo kwaye wenze i Ukuhamba ngebhayisikili kunye neRoll DC , kubandakanya ukukhwela ebusuku xa izikhumbuzo zivutha (ukusuka kwi- $ 45).
iingoma zelizwe eliphezulu lonke ixesha
Ukuba ucela ukuba kude nezinto zemfundo ngokupheleleyo, i-D.C ikwalikhaya lokutyela elimnandi, kwaye iGeorgetown ilungele ukuthenga (ineevenkile ezimalunga nama-500!). Kuba umntwana wakho okwishumi elivisayo uchitha ixesha elininzi ehleba malunga nale nto ayenzileyo lo mdumo okanye itwitter, mnike ithuba lokusondela kwezinye zeefifa zakhe, kubandakanya uTaylor Swift, uBeyoncé, uRihanna noJustin Bieber e Madame Tussauds Washington, D.C. Abanye abantu abadala banokuyonwabela ukubona uMarilyn Monroe, Marin Luther King, Omnci, bonke oomongameli baseMelika kunye noMalume Sam.
Ngaphambi kokuba ushiye iDC, bonisa umntwana wakho imali! Ukhenketho lwe I-Bureau yase-US yokuKrola kunye nokuPrinta ivumela iindwendwe ukuba zibone izigidi zeedola ziprintwa. Kwaye yeyona ndlela ilungileyo yokuntywila kutyelelo olunye lwemfundo (kodwa olonwabisayo).
Ulutsha oluzimeleyo: Ukuhamba ngenqanawa
Ukuphuma embindini wolwandle kunye nomntwana okwishumi elivisayo ongavakali njengeholide efanelekileyo, kodwa yizame. Ukuhamba ngeenqanawa kunokuba yinto efanelekileyo kwiintsapho ezijonge ukunika ulutsha inkululeko kunye namava apholileyo abawakhangelayo, ngelixa ikwabonelela ngelixesha losapho linqwenelekayo, utshilo uNorcross. Ukuhamba ngenqanawa kuqinisekisiwe ukuba kuya kuba mnandi kubantu abadala, kunye nemisebenzi yebhodi enjengeekhasino, ii-spas, iimuvi kunye nemiboniso, iivenkile kunye nemivalo, kwaye kuyonwabisa kulutsha. Iinqanawa ezintsha zokuhamba ngenqanawa zinezixhobo ezininzi ezithandwayo ngabantu abatsha abazithandayo-iiklabhu zolutsha, ukukhwela emanzini, imidlalo yezemidlalo kunye neemoto ezinkulu-ukubala nje ezimbalwa, utshilo uNorcross. Zonke ezi ndlela zinika usapho lwakho ithuba lokuthatha ikhefu kubunye xa kufuneka njalo.
Kwaye, ungahamba ngesikhephe kakhulu naphi na. Kukho iintlobo ngeentlobo zemigca yokuhamba ngenqanawa eneehambo zokuya kwiindawo ezinje nge ICaribbean , Bhahamas , kunye Mekhsikho . Ukuba ufumana amanqaku kwisivumelwano esifanelekileyo, ungabhukisha ubusuku obusixhenxe Ukuhamba ngenqanawa kwiCaribbean ukusuka eMiami ngemali encinci njenge- $ 279 ngeCarnival, kunye ubusuku ezintlanu-Mexican inqanawa ukusuka kwi-LA nge-340 yeedola ukuya kwi-Princess Cruises. (Ukubhabhela kwizibuko? Nazi izinto ezingama-21 abagadi beenqwelomoya abafuna ukuba wazi ngaphambi kokuba ukhwele inqwelomoya.)
Kwabahambi: iSydney, eOstreliya
Ulutsha lwakho lunokumba eliholide nangaphambi kokuba uphume ngenxa yokuba linika amalungelo amakhulu okuziqhayisa (owaziyo, abaluleke kakhulu kulutsha). Cinga ngako: Amathuba aphezulu kakhulu kangangokuba akukho namnye koontanga bakhe oya kuthi angaya kuwo ESydney, eOstreliya ngexesha lekhefu esikolweni. Ndicinga ukuba i-Australia yindawo entle kakhulu ukuba uhambe kuba xa uhamba kwilizwe liphela, kumnandi ukuya enkulu okanye ukugoduka, utsho UAndrea Feczko , Ingcali kwezokuhamba kunye nomlingani ngokubambisana kuthotho lweABC Indalo yeholide .
Ezinye zezinto ekufuneka-zibonwe ziimpawu zomhlaba ezaziwayo, kubandakanya Indlu yeSydney Opera kunye neSydney Harbour Bridge. Ungaphonononga iSydney Harbour ngesikhephe ukuze ufumane iimbono eziphambili kuwo omabini amabala, okanye ungazijonga kufutshane. ISydney Opera House inikezela ukhenketho, nangaphaya BridgeClimb , Ngokwenyani unokwenyuka uye kwindibano yeSydney Harbour Bridge (okanye isiqingatha, ukuba oko ukuthanda kwakho). Ezinye zeemyuziyam zokundwendwela zibandakanya igalari yezobuGcisa yaseNew South Wales kunye ne-Australia National Maritime Museum.
Ukuba ulutsha lwakho lufuna ukuphumla elangeni, intloko uye eBondi, eCoogee, okanye eManly Beach. Ukutshisa amandla, kwiMithi yoTyelelo uza kufumana ukujija, ukuxhuma, ukunyuka, kunye nokubhabha ehlathini. Okanye uthathe ulwandle ukuya kubukela iminenga; Oz Whale Ukubukela unikezela ukhenketho ukusuka kwi-75 yeedola nangaphezulu ezibandakanya isidlo sakusasa okanye isidlo sasemini. Xa kufika ixesha lokuphumla, IHilton Sydney Ihotele igqibelele. Ime embindini weSydney, inamagumbi abandwendweli amahle kakhulu kunye neutiites, iklabhu yezempilo, i-spa, iphuli yangaphakathi, kunye nabantu abadala, imivalo emibini. (Psst! Nazi iimfihlelo ezili-10 abasebenzi basehotele abayi kukuxelela.)
Enye yezona zinto zibalaseleyo ngeSydney, utshilo uFeczko, ngaba ibonisa ulutsha ukuba kulula ukufikelela kwihlabathi. Kufuneka ungene nje kwinqwelomoya kwaye ke ube nelizwe elitsha, kodwa ke abantu basathetha isiNgesi kwaye luhlobo olupholileyo lwesiNgesi, utshilo. Musa ukumangaliswa xa umntwana wakho okwishumi elivisayo ebuyela ekhaya enegama lobuxoki lase-Australia!
Kubathandi bezilwanyana: ISan Diego, California
Esi sisindululo sobuqu. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, usapho lwam lwandwendwela iSan Diego kunye neqela lolutsha. Kuninzi kakhulu ukwenza esixekweni! Wonke umntu uza konwaba. Ukuba umntwana wakho ukwizilwanyana nakwimpilo yolwandle, Ulwandle lweSan Diego uya kulinyikimisa ilizwe lakhe. Apha uza kubona i-aquariums entle, ihlengethwa, iingonyama zolwandle, ii-walrus, ii-beluga whale, oonombombiya, kunye nokunye. I-SeaWorld nayo inepaki yomxholo, i-SeaWorld I-Aquatica Waterpark . Ulutsha lunokonwabela ngakumbi uhambo oluya eAtlantis naseShipwreck Rapids ukukhwela amanzi kunye neManta rollercoaster. Kwaye ulutsha olujonge ukufumana ipati yabo kamva emini, kukho iklabhu yasebusuku ye-Club Atlantis evulekileyo ngeempelaveki ngexesha lasehlotyeni.
Ukuba unemoto ethandekayo kusapho (nokuba ngumntwana okanye iqabane lakho), tyelela iSan Diego Automotive Museum. Ezinye zeendawo zokubonisa apha zibandakanya iqoqo likaHarley Davidson, ngo-1981 iDeLorean DMC-12 (imoto ibonakaliswe njengomatshini wexesha kwi Buyela kwikamva film trilogy), i-1966 Bizzarrini P538, kunye ne-1974 Lamborghini Countach.
Qiniseka ukuba ubeka i Zoo yaseSan Diego kumcwangcisi wakho. Umntwana wakho okwishumi elivisayo angaqala ayibhale njengomntwana kodwa uyakutshintsha ingqondo kwimizuzu eli-10 yokuqala yotyelelo. Le zoo ine-tram yomoya ukuze ukwazi ukukhwela esibhakabhakeni ngelixa ujonge ezantsi izilwanyana, kunye neqonga le-4D evumela ababukeli ukuba babone, beve, banuke, kwaye bazive isenzo esikwisikrini.
Ewe, awukwazi ukushiya iSan Diego ngaphandle kokundwendwela ulwandle. Isixeko sibonelela ngeekhilomitha ezingama-70 zonxweme, ke bonwabela imozulu entle, amanzi amahle, kunye nesanti efudumeleyo. Okanye intloko eya eMission Bay ukuyithatha ukhenketho ngepladibhodi !
Kwiintsapho ezingaphandle: Anchorage, Alaska
Nangona iyinxalenye ye-U.S., IAlaska isenokubonakala ngathi ikwelinye ilizwe. U-Erin Kirkland Umbhali we I-Alaska Ekuhambeni: Ukuphonononga i-49 kaRhulumente kunye naBantwana , iAlaska idibanisa i-adventure eyoneleyo kulutsha olufuna i-adrenaline kodwa ikwanemiba ekholisa umzali kumathuba emfundo. Urhulumente unemiyuziyam eyahlukeneyo, kubandakanya iMyuziyam yase-Anchorage e-Rasmuson Centre, i-Alaska Aviation Museum, kunye ne-Alaska Native Heritage Centre.
Ngaphandle ngaphandle kunika iitoni zemisebenzi eyonwabisayo kwiintsapho, kubandakanya ukuhamba, ukuhamba ngeebhayisikile, inkampu, i-kayaking kunye nokuloba. Ungathabatha uhambo lokuhamba ngenqanawa ngosuku ukuze ubone amaqhekeza omkhenkce okanye izilwanyana zasendle; Uhambo lweGlacier Cruises ufumana indumiso ephezulu kubavavanyi. Okanye ukuba wena kunye nomntwana wakho okwishumi elivisayo niziva nidlala, ungafumana iliso leentaka ngokujonga izinto ezifanayo ngokuqhubeka ukhenketho lwenqwelomoya .
Enye yezinto ezipholileyo malunga neAlaska yinto eyahlukileyo kuyo yonke into. Ulutsha kunye nabazali bahlala befumana iAlaska njengendawo apho bobabini banokwenza into entsha, into ebeka wonke umntu kwindiza elinganayo, njengokunyuka komkhenkce kunye nokuntywila kwenja, utshilo uKirkland. (Khetha iibhutsi ezifanelekileyo zasebusika kuhambo lwakho! Ezi zezona zibini zibalaseleyo zabafazi, nokuba ufuna ntoni.)
Abalandeli bePaki yePaki: IOrlando, eFlorida
Umntwana wakho okwishumi elivisayo unokuthi mdala kakhulu kwiDisney, kodwa kukho ezinye iindlela eOrlando. Izitudiyo zendalo iphela kwaye I-Universal's Islands yolonwabo Iipaki zemixholo zibonelela ngemidlalo enomtsalane kumdlalo bhanyabhanya, ukukhwela imincili, kunye nokubonwa kwabantu abaninzi. Kwaye ilizwe leWizarding likaHarry Potter likho! I-Universal CityWalk, ngaphandle nje kwezi zimbini, yindawo yokuzihlaziya yangaphandle apho usapho lwakho lunokubukela imovie ye-IMAX, uve umculo ophilayo, kunye negalufa ngendlela yakho eshukumayo. Kwaye kufuneka uzame ukutya okumnandi (kodwa okumnandi) kwiindawo ezinje ngeHot Dog Hot of Fame kunye neToothsome Chocolate Emporium kunye neKrisimesi yomthendeleko weVenkile, apho kufuneka uqiniseke ngokugcina igumbi leetshokholethi kunye nohlobo oluthile izimuncumuncu.
Nge Ukufumanisa iCove , Usapho lwakho lunokuntywiliselwa kwihlabathi lobomi baselwandle. Unokwenza i-snorkel echibini leentlanzi zetropiki, okondla ngesandla iintaka ezingaqhelekanga, kwaye udade nehlengethwa. Ukuba umntwana wakho okwishumi elivisayo ukwi-wacky kunye nezinto ezothusayo, undwendwela URipley uyakholelwa okanye hayi iyimfuneko. Inemiboniso, izinto zakudala kunye nezinto ezingathandekiyo ezivela kwihlabathi liphela, kubandakanya neentloko ezinyanisekileyo ze-shrunken kunye neekiti zokubulala i-vampire ezinokuthi zifunyanwe ngumntwana wakho. Enye indawo apho umntwana wakho okwishumi elivisayo engayi kuyala yiMall eseMillenia, ehlala malunga neevenkile ezili-150. Siqinisekile ukuba ilungu ngalinye losapho lwakho liza kufumana ngokulula isikhumbuzo sokuya ekhaya.
Abafuna iNkcubeko: IsiXeko saseNew York
Xelela umntwana wakho okwishumi elivisayo ukuba niye eNew York, kwaye ngekhe nifumane zikhalazo. IsiXeko saseNew York sikuluhlu lweminqweno yeendawo zokuhamba ulutsha oluninzi (kunye nabantu abadala, nabo). Qiniseka ukuba ujonga iBhulorho yaseBrooklyn, Isitatyu senkululeko , Central Park, kunye ISikhumbuzo seSizwe seSeptemba 11 kunye neMyuziyam . E ubume besakhiwo sequmrhu , hamba uye kwiindawo eziphambili zokujonga (kumgangatho wama-86) okanye kumgangatho ophezulu (102nd) ukubona isixeko njengoko ungazange usibone ngaphambili.
Ukuba umntwana wakho okwishumi elivisayo ufuna isenzo esincinci, nantsi indawo. Isixeko saseNew York sikunika ukulinganisa kwemvakalelo ngokungathi kuninzi okwenzekayo, utsho uFeczko. Kuhlala kukho umboniso oza kuwubona kwaye kukho izinto ezininzi zokuzonwabisa. Ngapha koko, ngenxa yokuba uninzi lweenkqubo zikamabonwakude zifakelwe eNew York, wena kunye nomntwana wakho ninokubona indumasi okanye ezimbini. Nokuba awukwenzi, tyelela Ixesha lesikwere , kunye nezibane zayo ezibengezelayo ze-neon, iibhilibhodi ezinkulu zedijithali kunye nabalinganiswa beendleko, ngokuqinisekileyo kukwenza wena kunye nomntwana wakho ofikisayo nive ukuba nikwi-movie. Enye into umntwana wakho oza kuyithanda malunga nesiXeko saseNew York: iPizza. Kuyo yonke indawo kwaye kulungile!
ezona zixhobo zokuhlamba zihle kakhulu
uhlala ebona i-1111
kuthetha ntoni 444
inombolo 555 intsingiselo
Eyona ndlela yokuphelisa iimpukane
iipropathi zokuphulukisa iipropathi
ingaba ikhalane ilunywa njani